Momba anay - Shijiazhuang Kunxiangda Technology Co., Ltd.
Shijiazhuang Kunxiangda Technology Co., Ltd. dia naorina tamin'ny taona 2013. mpanao fanamboarana matihanina izahay ho an'ny mpanelanelana amin'ny fanafody sy ny orinasa mpivarotra ho an'ny mpanelanelana amin'ny loko, ary ireo akora simika hafa. Ny orinasa misy anay dia miorina amin'ny faritra fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia ao amin'ny tanànan'i Shijiazhuang, faritanin'i Hebei. Ny velarantany dia manodidina ny 50 hektara, ary misy mpiasa mihoatra ny 300, ao anatin'izany ny mpiasa teknika 9.
Izahay dia mamokatra 1,3-dimethylurea (DMU) matetika ary manao orinasa miaraka amin'ny Methylurea (MU), 6-Amino-1,3-dimethyluracil (DMAU), 6-Chloro-3-methyluracil (CMU), 6-Chloro-1, 3-dimethyluracil (CDU), Sodium Cumenesulfonate (DMS), Ethylene glycol diformate (EGDF) ary ireo mpanelanelana amin'ny fanafody hafa sy mpanelanelana amin'ny loko. Nanangana ekipa mpividy matihanina izahay hanampiana ireo mpanjifa vahiny lehibe hahita ny mpamatsy sahaza sy mendrika indrindra amin'ny tsena anatiny an'i Sina. Ary eken'ny mpanjifa miaraka izahay. Nandritra ny folo taona teo ho eo traikefa dia manana laza tsara eo amin'ireo mpanjifa taloha sy vaovao izahay. Ny vokatra dia aondrana any Eropa, Amerika Atsimo, Azia, Moyen Orient ary firenena sy faritra am-polony maro hafa, ary koa nanangana tambajotra marketing matotra sy marin-toerana.
Nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny University Tsinghua sy University of Science and Technology Hebei izahay hanatsarana ny teknolojia famokarana vokatra efa misy, hampihena ny vidiny, hanatsara ny kalitao ary hiantohana fa ny ambaratonga teknika dia mitarika ao an-trano sy any ivelany. Mandritra izany fotoana izany dia manohy mamokatra vokatra vaovao izahay hampiroborobo ny fampandrosoana maharitra ny orinasa. Orinasa manaraka ny foto-kevitry ny firindrana, ny fahamendrehana, ny fampandrosoana, ny fandresena-pandresena, mino tanteraka fa ny kalitao no ain'ny orinasa, hanomezana kalitao ny mpanjifa serivisy ho an'ny tanjon'ny orinasa.
Miezaka hatrany izahay mba ho mpiara-miombon'antoka azo antoka indrindra amin'ny mpanjifanay, ary ezahinay ny manangana orinasa mpamokatra vokatra simika tsara atokisana sy hajaina amin'ny fiaraha-monina! Manantena izahay fa afaka manana mpiara-miasa tsara kokoa manerantany! Ary manantena ny fitsidihanao izahay!